अबको प्रधानमन्त्री को? पार्टी एकता हुन्छ त? यसो भन्छन् गोकर्ण बिष्ट (भिडियो) – Gulminews
Home/निर्वाचन अप्डेट/अबको प्रधानमन्त्री को? पार्टी एकता हुन्छ त? यसो भन्छन् गोकर्ण बिष्ट (भिडियो)
अबको प्रधानमन्त्री को? पार्टी एकता हुन्छ त? यसो भन्छन् गोकर्ण बिष्ट (भिडियो)
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७४ पुष ३, सोमबार ०२:५४ मा प्रकाशित
गुल्मी, पौष ०२ । नेकपा एमाले सचिब तथा गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ का नवनिर्वाचित सांसद गोकर्ण बिष्टले नेपाललाइ एउटा धनी र सुखी देश तथा नेपालीहरुलाइ धनी देशका धनी जनता बनाउन आफुहरुले लाग्ने बताएका छन ।आफु सांसद बन्न मात्र निर्वाचित नभएको भन्दै उनले जनताको असल सेवक बनेर काम गर्ने बताए । मुसिकोट नगरपालिकाले गरेको नवनिर्वाचित प्रतिनिधिको स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै उनले जनताको सुख दुखमा सदैब साथ दिने बताउँदै आफ्नो जिम्मेवारी नबिर्सने बताए ।
चुनाव जित्नु एक सामान्य प्रक्रिया भएको भन्दै उनले अब जनताका कामहरु गर्न सक्नु ठुलो कुरा भएको बताए ।
देशमा गरीबी, भोक, अशिक्षा तथा बेरोजगारी ब्याप्त रहेको भन्दै उनले यो २१ औ शताब्दिमा पनि जनताले ठुला ठुला समस्याहरु सामना गर्नपर्नु दुखद भएको बताए । उनले अहिले बाम गठबन्धनले पाएको अभिमतलाइ निराशामा परिणत हुन नदिने बताए ।बिशाल सम्भावनाहरुको बिचमा भएका बिभिन्न समस्याहरुलाइ समाधान गरी समृद्ध, सुखी र धनी जनता बनाउनु ज्यादै गम्भिर चुनौतीको रुपमा अहिले खडा भएको उनको भाए ।
हेरौँ पौडेल डिजिटल स्टुडियोका रबिलाल पौडेलले लिनुभएको उहाँसँगको भिडियो अन्तर्वाता: